Iyazuza imisakazo ngo-DJ abadumile | IOL Isolezwe
Iyazuza imisakazo ngo-DJ abadumile
Isolezwe / 3 July 2012, 10:54am /
UDJ Tira angenza umsebenzi omuhle uma engathola ithuba lokuba umsakazi.	Isithombe: SITHUNYELWE
IGALELO loDJ bakuma-night club liyezwakala emsaka-zweni kulezi zinsuku.
Phambilini imisakazo eminingi njengoKhozi FM bewungayinaki indaba yokudonsa abalaleli ngokusebenzisa labo DJ.
IMetro FM ne-YFM yizona ziteshi ebezimandla ukusebenzisa oDJ ekubeni ngabasakazi noma babafake ezinhlelweni ezehlukene.
IGagasi like lawuzama lo mqondo ngokusebenzisa izilomo zaseThekwini uDJ Tira noDJ Sox, kwaba yibona “abazishayela eceleni” ngokubonakala begqoke izikibha zoKhozi FM, okuyimbangi enkulu yeGagasi.
Angisho ukuthini kodwa ngiwumsakazo onjengoKhozi FM noma iGagasi FM ngingazama ngazo zonke izindlela ukusebenzisana noDJ Tira ngasohlangothini lwezinhlelo.
Uma ungumuntu olandela izinto zobumnandi uzovumelana nami uma ngithi uDJ Tira eyedwa nje unabalandeli abaningi, cabanga-ke uma esefika nabalandeli bakhe emsakazweni onjengo-Khozi FM noma iGagasi FM, angingabazi ukuthi uKhozi FM lungawushaya manje u-8 million.
Kulezi zinsuku iGagasi FM lisebenzisana kahle noTira, sekusele ukuthi lumnike uhlelo alisize ukuthi lufike luphinde lwedlule ku-3 million njengoba lusazama ukufinyelela ku-2 million.
Iqiniso ukuthi kunabasakazi abangenaba-landeli. Mhlawumbe kumele ngikubeke kucace ukuthi kusho ukuthini ukuba nabalandeli uma ungumsakazi.
Lokho kukodwa kungenisa eningi imali emsakazweni uma umsakazi enabalandeli. Into eyenza umsakazo uye phambili kuba yizikhangiso, uma ulalela izinhlelo, azifani.
OKhozini kunohlelo lukaLinda Sibiya noma lukaDudu Khoza othola ukuthi lunabalandeli abadlulile ku-2million.
Ake sithi ngingusomabhizinisi ngifuna ukufaka isikhangiso, ngizoya ezinhlelweni zalaba basakazi ngoba yizo ezinabalaleli abaningi. Ngiyalwazi udaba lokuthi noma bangaba baningi abalaleli kodwa kukhona abakhangisi abazibuzayo ukuthi ngabe bangobani labo balaleli, banawo yini amandla okuthenga noma qha kodwa izinombolo zibalulekile kakhulu, yingakho kubalulekile ukuthi umsakazo wazi ukuthi ukhuluma nobani.
Bheka uhlelo lwasekuseni kuGagasi FM luka-Alex Mthiyane, uma uluqhathanisa nezinye izinhlelo zalo msakazo, uyathola ukuthi yilona oluhamba phambili.
Usomabhizinisi uma efuna ukufaka isikhangiso ngicabanga ukuthi ubuza ngalolu hlelo uma ehluleka ngenxa yokuthi amanani awafani abe esedlulela kwezinye izinhlelo.
Uma ucabanga ngeGagasi FM ufikelwa u-Alex ekhanda, ube sewuyakholelwa ekutheni umkhiqizo wakho uzohamba kahle uma uwufaka kulolu hlelo.
Uma sibuyela kuDJ Tira, okokuqala loDJ udume iNingizimu Afrika yonke, ngike ngambona edlala eKapa abantu bahlabeka umxhwele, ngisho nakoPolokwane.
Cabanga uTira uma kuthiwa useGagasini, ngithi uma ngihlala eKapa ngizitshele uma ngivakashele eThekwini ukuthi ngifuna ukulalela uhlelo lukaTira weGagasi eThekwini.
Hhayi kabi kodwa uDJ Tira cishe udume ukuzedlula lezi ziteshi kwezinye izindawo.
Zibuze umbuzo owodwa kungani iMetro FM yalanda uDJ Oskido, Naves, Sphectecular, Lulo Café, Siyanda, Naked DJ, Sbu, Vinni Da Vinci noDJ Christos, angicabangi ukuthi balandelwa ngoba benswempu njengabasa-kazi kodwa balandwe ngenxa yabalandeli abanabo.
Lokhu kukuveza obala ukubaluleka koDJ ekubeni yingxenye yemisakazo kulezi zinsuku.